Literary masikati naJon Arretxe muAranjuez. 19 makamera mharidzo | Zvazvino Zvinyorwa
Literary masikati naJon Arretxe muAranjuez. 19 makamera mharidzo
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Zviitiko, Mabhuku, Nhema nhema
Mifananidzo: 1. (c) Mariola Díaz-Cano Arévalo. 2. (c) Joaquin Cot.
Masikati ekupedzisira aApril 4, munyori weBasque Jon arretxe Akanga ari mukati Aranjuez achiratidza bhuku rake 19 makamera, wekutanga weavo vaitarisa hunhu hwake, iye Burkinabe mubvakure Touré, iyo inogara mu Bilbao uye anoita seye cowrie caster, Muimbi weOpera, detective uye kunyange gigolo. Akatiudza zvinhu zvakawanda pamusoro hupenyu hwake nebasa rake mumaawa akati wandei wakasununguka uye nekutora chikamu kwakawanda kubva kune vateereri, vaverengi avo vazhinji vacho vanga vatoverengera bhuku iri.
Icho chaive chiitiko chakarongedzwa mukati me Nhema Novel Mutambo, Margarita Negra, Yakarongedzwa neESES Margarita Salas de seseña. Ipapo takave nemukana weku uti mhoro utore siginecha yako uye avo vaida vakapfuurira manheru nemanheru. Ini ndinoreurura kusaziva kwangu basa raArretxe, asi rake kuswedera, kureruka uye hupenyu hwake hwakapfuma uye zviitiko zvekunyora vakandikunda.
2 Touré akateedzana
3 Mibvunzo yevaverengi
4 Vanyori vako vaunofarira
4.1 Kuti uwane rumwe ruzivo: Jon Arretxe.net
Uyu munyori anoshanduka-shanduka akaberekerwa mu Basauri ane doctorate mu Basque Philology, dhigirii reBachelor mu Dzidzo yemuviri uye madzinza e piyano uye kuimba. Aive zvakare mudzidzisi weBasque nePhysical Education uye parizvino anorarama kubva mukunyora, kubva kuhurukuro dzake uye hurukuro pamusoro pekufamba kwake nemabhuku, uye nekuimba opera.
Waive mufambi ane njodzi uye akafamba nyika zhinji mu Asia uye Africa. Pakanga pari ipapo apo maAlgeria Sahara, Mali neSenegal akayambuka nebhasikoro. Rwaive rwendo rwakasimba zvekuti akafunga kuuisa mudhayari raive nemusoro waro tubabou. Akachiendesa kumakwikwi, akahwina uye mushure mekugamuchirwa kukuru kwevaverengi akafunga kuramba achinyora.
Asi rimwe zuva akaneta zvishoma nezvekufamba kwakawanda uye kwekunyora uye akawana iyo nhema nhema. Nekudaro, mumabhuku ake tinogona kuwana mahybrids anosanganisa iyi mhando neiyo yekufamba, seizvi mazita:
Mugwagwa wevatumwa - Lisbon.
Shahmaran - Istanbul.
Tangier anorota - Tangier.
19 makamera es wekutanga weavo vaitarisa mutambi uyu uye Arretxe, nerutsigiro rwekuona rwe projekiti, aitaridza mavhidhiyo emishumo pamusoro Bilbao uye marongero emazano ayo. Kunyanya, akatitora kuburikidza nemunharaunda ye San Francisco, inofungidzirwa nevakawanda senzvimbo yevarombo uye yepakati uye ghetto yemutorwa. Muchidimbu, "isina kuchengetedzeka" uye nenzira isingafungidzirwe nzvimbo iyo kuna Arretxe ndiyo nzvimbo yakakodzera yekuvandudza nyaya dzavo.
Tsika mabara, makwikwi akashata, brothels, imba yemamongi, narcoslas, mafatera epatri… Asi isu takashanyirawo vamwe seEuskalduna Musangano neMusic Palace, semuenzaniso. Zvese zvakakosha seyakavakirwa yemanovels akatakurwa nawo rima rakawanda uye kushoropodzwa munharaunda.
Muchokwadi zvakare, ino nhevedzano yeTouré yakanyorwa imomo, chete mufurati munogara munhu uye kuti munyori akakwanisa kuwana pasina mubvunzo kurudziro yese. Izvo zvaivimbawo nemasangano enharaunda uye akasiyana varimi anogara muSan Francisco, kubva pfambi, nzvimbo dzekudyidzana dzekuchengetwa kwevatorwa kana zvakafanana mapurisa emapurisa uye Ertxaina.
Iwo akateedzana ane 5 mazita uye akatiudza izvozvo, ikozvino, akaipaka, nekutya kubiwa nenjiva kana kugara kune yakasarudzika tsika inozove yakanyanya kutsamira pane izvo zvinodiwa nevaverengi vavo. Kunyange zvakadaro, haana kukanda mapfumo pasi pairi uye pamwe ichaenderera mberi.
Pakanga paine akati wandei, pamwe nezvakataurwa uye mibvunzo yakajairika nezve ake chimiro, mapurojekiti ako matsva kana vanyori vako vaunofarira. Aya ndiwo maitiro aakatitaurira kuti anofarira kunyora mapfupi enganonyorwa uye kuti pasina kupokana unofanirwa kutora mukana wekurudziro painowoneka. Akabvuma kuti parizvino anorwara ne kukiya mune basa riripo, a nyowani nyowani nharaunda yekumaruwa zvakare jenda nhema.
Akapindurawo mubvunzo wakajairika wekuti anowana Touré seyake chinja ego, kwaakapindura kwete. "Zvakanaka, kupfuura chero chinhu nekuti iye mutema uye ini handisi," yaive yake yekuseka. Akapindura zvakare kuti anofarira mativi ake maviri semuimbi weopera uye munyori. Uye nezve ake hukama nemapurisa kana ertxaines, uyo asingabude zvakanyatsonaka mumanovel, akataura kuti havazvifarire zvakajairika, asi kuti haana kumbove nematambudziko. Akaudza anecdote yemupurisa wemuguta, anozvitora zvakanaka, uyo akamuudza rimwe zuva kuti hapasisina iwo 19 ekucheresa makamera akaiswa munharaunda iyo zita rinoreva, asi kuti pane makumi maviri nerimwe.
Vanyori vako vaunofarira
Kana vari vanyori vaanofarira, akasimbisa izvi, kunyange aine zvimwe zvakawanda:
Thierry Jonquet, waakataura zita rake Tarantula, iyo yakafuridzira iyo bhaisikopo Ganda Randinogararakanyorwa naPedro Almodóvar.
Kuti uwane mamwe mashoko: Jon Arretxe.net
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Literary masikati naJon Arretxe muAranjuez. 19 makamera mharidzo
Akanakisa Mabhuku eAsia Akambove
Mabhuku aLaura Gallego: fungidziro uye vechidiki adventures